नेमकिपालाई च्यालेन्ज गर्ने मिलन सुवाल को हुन ? – RadioMBC
Home > राजनीति > नेमकिपालाई च्यालेन्ज गर्ने मिलन सुवाल को हुन ?
१४ मंसिर २०७४, बिहीबार १६:१०
भक्तपुर न.पा. को बिकाश र सम्बृद्धिको सवाल ! प्रत्येक मतदाताको दुख-सुखमा मिलन सुवाल !! भन्ने जनप्रीय मुल नाराको साथ चुनाबी मोर्चामा होमिएका मिलन सुवाल भ.पु.जि. क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभाका लागि बाम गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुन । माथी उल्लिखित नारा बमोजिम नै भक्तपुर – १ क्षेत्रमा मिलन सुवाल उत्तिकै लोकप्रीय नाम हो ।
आफ्नो जिन्दगिको उर्बर २३ बर्ष सक्रिय राजनितिमा खर्चेका सुवाल जनताका सुखमा सङ्ग – सङ्गै रमाउछन भने दुखमा उत्तिकै दिलोज्यानले साथ दिने गर्छन । उनमा भएको यहि अनुकरणिय गुणका कारण यहाको बहुसँख्यक मतदाताहरुले इच्छाएकै कारण चुनाबी मैदानमा छन उनी ।
उमेरले ३८ वसन्त पार गरिसकेका सुवाल भ.न.पा. – ६ चोछेँका स्थाइ बासिन्दा हुन । स्कुले जिबनमै बिध्यार्थी राजनिती थालेका उनले प्रमाणपत्र तह उतिर्ण गर्न भ्याए ।
०५२ देखि ०५४ सम्म अखिल क्रान्तिकारिका जिल्ला सचिबको सफल भुमिका निभाउदै तत्पस्चात जनयुद्दका होलटाइमर क्याडरको भुमिका शुरु गरे र नगर समिती, जिल्ला समिती, राज्य समिती हुँदै हाल केन्दृय सदस्य तथा भक्तपुर जिल्लाको सह संयोजकको जिम्मेबारिमा छन ।
भद्र र सालिन स्वभाबका सुवाल १० बर्षे जनयुद्दका कुशल कमाण्डर समेत हुन । भिषण बर्गसंघर्षका बेला होस या ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा होस उनले आफ्नो जिम्मेवारी दृढताका साथ निर्बाह गर्ने गरेकै कारण उनको जनता सङ्गको जनसम्बन्ध मजबुद थियो र छ ।
यहि जनसम्बन्धलाई उचित सम्बोधन गर्ने गरि जनताको उत्साहपुर्ण जनउभारलाइ दर्होसङ्ग हृदयङ्गम गर्दै आफुले भक्तपुर -१ को उम्मेदबारी दिएको बताए ।